Ezendalo (100%) Izicatshulwa zeHerb, iiHerb Extracts, iZityalo eziNtsusa abaBoneleli, iiNtengiso - iMedicinerawmaterials.com
Ilitye eliluhlaza > iimveliso > Amachiza akhutshwayo
yethu Izinto ezikhutshwayo ngamayeza Zizinto ezikhutshiweyo okanye ezenziwa kwizityalo (zonke okanye inxenye yesityalo) ngokusebenzisa izinyibilikisi okanye iindlela ezifanelekileyo. Zingasetyenziselwa amayeza, ukutya, impilo, ubuhle nakwamanye amashishini.
Sinokubonelela ubuncinci beentlobo ezili-1,000 ze izicatshulwa zezityalo ngexabiso elifanelekileyo. Izinto zokuthambisa, ulusu, iimveliso zobuhle, ukutya kwezempilo, ukongezwa kwesondlo kunokwenza olona hlobo lubalaseleyo Imichiza ekhupha imithambo.
Psoralen Imbewu yePowder
Ukukhupha iziqhamo zevatala
Incindi yebheri emnandi (iswiti…
Uluhlu lweeHerbal Extracts
Uluhlu lwezithako zeBotanical
Incindi yebheri emnandi (isandi esimnandi…
Isicatshulwa seKappaphycus Alvarezii
Miraculin Powder Caphula
4: 1 ku-20: 1
IArnica Montana yeoyile yeentyatyambo
Ipea iPeptide powder
Isikhunta seTremella Fuciformis…
Isicatshulwa seLingberry (isitofu…
Iphepha langoku 1
kwiphepha elilandelayo $
Ikhasi lokugqibela Gqibela »
yethu isicatshulwa semifuno ivela kwizityalo. Ngokwokusetyenziswa kwemveliso yokugqibela ekhutshiweyo, ngenkqubo ye-physicochemical extraction kunye nenkqubo yokwahlulahlula, inkqubo ye- isicatshulwa semifuno iyalelwe ukufumana enye okanye ezingaphezulu izithako zezityalo kwisityalo sokugxila ngaphandle kokutshintsha ubume besithako esisebenzayo. Ngokwamacandelo ahlukeneyo ezityalo ezikhutshiweyo, i-strontium, i-asidi, iipolyphenols, i-polysaccharides, i-terpenoids, i-flavonoids kunye ne-alkaloids zenziwa; ngokweendlela ezahlukeneyo zazo, zinokwahlulwa zibe yioyile yemifuno, ikhonkrithi, umgubo, ilensi njalo njalo.
Umzekelo, ii-alkaloids ziludidi oluntsonkothileyo lwe-nitrogen enezinto eziphilayo ezinemisebenzi ekhethekileyo yomzimba kunye neziphumo zonyango. Umzekelo, i-ephedra iqulethe i-ephedrine kunyango lwe-asthma, kwaye i-hembane iqulethe i-hyoscyamine ye-antispasmodic analgesia. IiGlycosides zidityaniswa ngokudityaniswa kweswekile kunye nezinto ezingezizo ezeswekile. Ukuqheleka kwe-glycosides kukwinxalenye yeswekile ngelixa iintlobo ezahlukeneyo ze-aglycones zinemisebenzi eyahlukeneyo yomzimba kunye nemisebenzi emininzi. Umzekelo, amagqabi edijithali ane-glycoside yentliziyo eqinisa isiphumo sentliziyo, kwaye i-ginseng iqulethe ii-ginsenosides ezinokuthi zenze i-Qi, ikhuthaze ukuvelisa amathe kunye nokuphelisa ukungazinzi kwengqondo nokuzola komzimba.